गर्मीमा पसिनाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? - टिप्स - साप्ताहिक
- डा. अरुणकुमार सिंह
 गर्मीका दिनहरूमा अन्डरगार्मेन्ट सुतीको मुलायम अर्थात् पसिना सोस्ने खालको, हावा आवतजावत हुन सक्ने हुनुपर्छ ।
 लुगा फेर्नासाथ पट्याएर नराख्ने, किनभने पसिना गुम्सिएर लुगा गन्हाउन सक्छ ।
 आफूलाई पसिनाको दुर्गन्धबाट जोगाउन चाहने हो भने अन्डरगार्मेन्ट आफ्नो रियल साइजभन्दा धेरै टाइट नहोस् भन्ने कुरामा सचेत हुनुपर्छ ।
 सफा अन्डरगार्मेन्ट्स मात्र लगाउनुपर्छ । अन्डरगार्मेन्ट्सलाई घाममा सुकाएर मात्र लगाउनु उपयुक्त हुन्छ ।
 घरबाहिर निस्कँदा पफ्र्युम, बडी स्प्रे आदि प्रयोग गर्ने ।
 पसिनाको दुर्गन्धबाट जोगिन शरीरको अन्डरआम्र्स तथा अन्य भागका नचाहिने
रौँहरू हटाइदिने ।